WinFF - Ultimate Free Multimedia Conversion Tool for Windows and Linux Users | mmshare
What is WinFF?
WinFF ဆိုတာ Command Line ကနေ ဗီဒီယို ဖိုင်တွေကို MP3, MP4, FLV စသည်ဖြင့် အသွင်အမျိုးမျိုးပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ FFMPEG ဆော့ဖ်ဝဲရဲ့ GUI version ပါ။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် FFMPEG ဆော့ဖ်ဝဲက Command Line မှာ ပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ ဖိုင်အားလုံးကို ပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဖိုင်အမျိုးအစားများစွာကိုလည်း တစ်ပြိုင်တည်း အသွင်ပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက သူ့ထဲကို FLV, WMV, AVI, MOV စတဲ့ မတူတဲ့ ဖိုင်တွေ ထည့်ပြီး အဲဒီဖိုင်တွေကို mp4 အဖြစ် တစ်ပြိုင်တည်း ပြောင်းခိုင်းတာမျိုးပါ။
Open Source and Multiple OS Support
WinFF ဆော့ဖ်ဝဲဟာ Free, Open Source ဆော့ဖ်ဝဲ ဖြစ်ပါတယ်။ GNU/GPL လိုင်စင်နဲ့ ထုတ်ပေးထားတဲ့အတွက် မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာ စိတ်တိုင်းကျ အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆော့ဖ်ဝဲကို Windows နဲ့ Linux OS တွေမှာ သုံးလို့ ရပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ Windows အတွက် Windows 95, 98 , ME, NT, XP, VISTA, Windows7OS တွေမှာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ Linux အတွက် Debian, Ubuntu, Redhat အခြေပြု GNU/Linux distributions အားလုံးမှာ သုံးနိုင်ပါတယ်။
အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်း - Easy to use interface.
လျင်မြန်ခြင်း - Fast (Winff does not hinder FFmpeg in anyway)
ထွက်လာသည့် ဗီဒီယိုများ၏ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ခြင်း - High quality output
မတူညီသည့် ဖိုင်အမျိုးအစားများကို တစ်ပြိုင်တည်း ပြောင်းလဲပေးနိုင်ခြင်း - Converts multiple different files all to the same format at once.
ဗီဒီယိုဖိုင်များကို အသံဖိုင်များအဖြစ် ပြန်ပြောင်းပေးနိုင်ခြင်း - Convert video to audio
အသံဖိုင် အမျိုးအစား ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း (ဥပမာ - wma မှ mp3) - Convert between audio formats.
သီးခြား ဗီဒီယို Codecs များ မလိုအပ်ခြင်း - No external codecs needed.
အသုံးများသည့် ဖိုင်အမျိုးအစားများအတွက် ကြိုတင်ဖန်တီးပေးထားသည့် အပြင်အဆင်များ ပါရှိခြင်း - Includesavariety of preset conversion settings for common formats and devices.
မိမိစိတ်ကြိုက် အပြင်အဆင်များလည်း ပြုလုပ်သတ်မှတ်ပေးနိုင်ခြင်း - Preset conversions can be created to encode to any format FFmpeg supports.
Bitrate, Frame size, Frame rate များကို အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း - Easy access to common conversion options such as bitrate, frame size, frame rate.
FFmpeg version များ အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း - Easily change FFmpeg versions.
Dual Core processor များအတွက် Multi Threading ရနိုင်ခြင်း။
ဘာသာစကား 18 မျိုး ပြောင်းလဲ သုံးစွဲနိုင်ခြင်း။ - Multilingual, available in over 10 languages
Windows Computer များအတွက် Portable Version အဖြစ် USB Drive များတွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ခြင်း
Download Links & Resources
Portable Windows Version of WinFF
WinFF Wiki - How To And More
Going With Free Softwares is Really Free
ကျွန်တော် တစ်ချိန်က တရားမဝင် ဆော့ဖ်ဝဲတွေကို (ဝယ်သုံးရမယ့် ဆော့ဖ်ဝဲတွေကို ဝယ်မသုံးဘဲ) ပျော်ပျော်ကြီး သုံးခဲ့ဖူးပါတယ်။ စာတွေအဖတ်များ၊ အင်တာနက် သုံးတာများလာတော့ ဆော့ဖ်ဝဲတွေကို ဒီလိုသုံးတာဟာ မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်း မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိလာပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ ဝယ်ဖို့ အဆင်ပြေရင်၊ ကိုယ်လည်း ဝယ်နိုင်ရင် ဝယ်သုံးပါတယ်။ မဝယ်နိုင်ရင် လုပ်ဆောင်ချက်တူတဲ့ အခမဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲ (Free Software) တွေကို ရှာသုံးပါတယ်။ ခုချိန်ထိ ရာနှုံးပြည့် မသုံးနိုင်သေးပေမယ့် လက်ရှိသုံးနေတဲ့ OS အပါအဝင် 95 ရာနှုံးလောက်ရှိတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲတွေကတော့ ဝယ်သုံးတာနဲ့ Free Software တွေပါပဲ။
စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေ ညိအကို မောင်နှမများရော ဘယ်လို အခမဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလေးတွေများ သုံးနေကြပါသလဲ.... Comment လေးထဲမှာ ဝေမျှသွားစေချင်ပါတယ်...